SomaliTalk.com » ciidul
Home » Qoraallada Halkudhegga "ciidul"
Sida looga Ciiday Denmark gaar ahaan Copenhagen iyo Randers
Maalintii Axada bisha islaamkuna ahayd 10 kii Dulxija ayaa magaalada Randers ee wadanka Denmark waxay kuwada ciideen halmeel daka islaamkaa ee degan halkaas. Waxaa latukaday saacadu markii ay ahayd 09:00 kadibna waxaa bilaabmay khutbadii markii ay dhamaatayna waxaa bilaabmay in muslimiintii halkaa isugu timi ay isu marxabaynayeen iyagoo faraxsan. mudo Sodon daqiiqo ah ayey qaadatay intii laysu marxabaynaayey.ka...
Halkudheg: Adxaa, ciidul
Munaasabad aad u Balaaran oo lagu Waynaynayo Maalinta Ciidul Adxaa ayaa lagu qabray Magaalada Wuhan ee Dalka China, Taasi oo ay kasoo qayb galeen Marti Sharaf isugu jirta Dhaqaatiir, Arday iyo Walidiin. Madasha Xafladan ayaa ahayd mid ay soo Agaasimeen Ururka Ardayda Somaliyeed ee China , waxaana halkaasi lagu lagu soo bandhigay Maalintan Qiimaha ay u leedahay Umuda Muslimiinta Gar’ahaan Somalida...
Qaabkii Looga Ciiday Toronto – Canada
-Waxaa maalinkii Axadda oo ay ah taariikdu ahayd November 6,2011 lagu tukaday Markazka weyn ee Dar-ul-Hijra Islamic Centre ee ku yaal magaalada Toronto ee Dalka Canada Salaaddi Ciidul Adxada . Dadka Muslimiinta ee halkaas isugu soo baxay oo kumayaal gaarayay ayaa waxaa wajigooda ka muuqday farxad iyo rayn rayn . Khutbadi Ciidda waxaa halkaas kasoo jeediyay Sheekh Dr. Abu Ahmed . Waxaa kale oo madasha...